Social Media na Were Ego n'Ọrụ | Martech Zone
Social Media na Were Ego na Were Ego
John Jantsch jụrụ nnukwu ajụjụ, Have nwere Social Media Na-abụghị Mpi?
Ajụjụ ọzọ nwere ike ịbụ, “Otu ụlọ ọrụ ọ nwere ike ịmanye mgbasa ozi mmekọrịta anaghị asọ mpi?”Lọ ikpe na-elegharakarị mmachi nke ndị were mmadụ n'ọrụ machibidoro ikike nke ndị were ha n'ọrụ ịchọ na ịkpata ego. Ebe ọ bụ na a na-amanye ọtụtụ ụlọ ọrụ ka ha jiri usoro mgbasa ozi na-agba ndị ọrụ ume ka ha sonye, ​​olee otu anyị ga-esi atụ anya na ndị ọrụ mbụ agaghị?
Ọ bụ ihe mgbagwoju anya maka ụlọ ọrụ, mana n'eziokwu niile, enwere m obi ụtọ na ụlọ ọrụ na-eche ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a siri ike ihu. Anya ọla edo na-adịwanye obere ka ndị ọrụ na-atụgharịkarị.
Enweghi ihe ozo dika ikwesi ntukwasi obi na ulo oru… ha gha ewepu ole na ole ndi oru ha n’enweghi ntabi anya ma o buru na o gha enyere aka nye onu ahia ha ngwa ahia. Ndị ọrụ abụrụla ndị na-eguzosi ike n’ihe n’ikwesị ntụkwasị obi nye ndị were ha n’ọrụ, na-amata na mbuli elu ọzọ ha ga-abịa nwere ike ịbịa mgbe ha kwagara onye were ha n’ọrụ ọzọ.
N'ihi ya, ọ nweghị onye ga-atụle mmetụta nke ndị ọrụ gbanwere ọzọ na ọrụ ndị ahịa, ogo, ma ọ bụ ọbụlagodi ọganiihu nke ụlọ ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịgbanwe nke a. Social media na-ewepụta onye ọrụ ya ihu n'ihu na etiti… ụlọ ọrụ na-aghọ ndị a ma ama maka ndị ọrụ ha kama ịbụ logos na okwu ndị na-enweghị atụ.
Ruo oge ụfọdụ, a na-elele ọrụ mmadụ anya dị ka nnukwu ego nke ụlọ ọrụ, na-ejighị ya kpọrọ ihe maka àjà ha mere iji hụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ọganiihu na uto ya. A na-enye otuto ahụ mgbe niile maka ụlọ ụlọ.
Dị nnọọ ka ndị na-azụ ahịa na-enye ike site na mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ụlọ ọrụ na-eme ihe ma na-ege ntị, ugbu a ndị ọrụ na-enye ikike yana ha na-anọchite anya ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ. Nke a chọrọ ụlọ ọrụ ka ha chegharịa onye ha na-goro ọrụ, etu ha si emeso ndị ọrụ ha ọfụma, na etu esi ejikwa ndị ọrụ n’ọrụ.
Ikekwe ụbọchị elekere ọla edo na ụbọchị ncheta ndị ọrụ ga-alọghachi!
Tags: Duct Mezie MarketingJohn Janschadighi mpielekọta mmadụ media
Ọchụchọ mpaghara na-eto, Are nọ na maapụ ahụ?
Na Vegas Izu a na WebTrends Tinye